Laba beelood oo ku dagaalamaya duleedka Degmada Doolow | Dhacdo
Home Wararka Maanta Laba beelood oo ku dagaalamaya duleedka Degmada Doolow
Laba beelood oo ku dagaalamaya duleedka Degmada Doolow
Dagaal beeleedkan ayaa ka soo cusboonaaday duleedka Degmada Doolow ee Gobolka Gedo, iyadoona uu salka ku hayo dhul beereed.
Dagaalka ka socdo deegaanka Bohol-garas ayaa u dhaxeeyo laba beelood oo walaalo ah, sida uu sheegay Gudoomiye Kuxigeenka Arrimaha Bulshada ee Degmada Doolow, Ismaaciil Cabdullaahi Daahir.
Inta la xaqiijiyay lix qof ayaa ku dhimatay dagaalka, toban kalena way ku dhaawacantay, waxaana dhaawacyada la geeyay goobaha caafimaadka ee ku yaala Doolow.
Ismaaciil Cabdullaahi Daahir, Gudoomiye Kuxigeenka Arrimaha Bulshada ee Degmada Doolow ayaa sheegay in Maamulka Gobolka Gedo, kan degmada, culimo iyo ganacsato ay wadaan dadaalo lagu joojinayo colaadda ka soo cusboonaatay gobolkaasi, isagoo intaa ku daray in uu socdo qorshe ciidamo lagu kala dhex dhigayo beelaha dagaalamaya.
Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Gedo, Axmed Buulle Maxamed (Gareed) oo ka hadlay dagaalkaasi ayaa sheegay in uu ka socdo deegaan dhinaca kale ee webiga ka xigga Degmada Doolow.
“Deegaan Degmada Doolow dhinaca kale ee webiga ka ah ayuu ka socdaa dagaalka, laba beelood baana ku dagaalamaya.” Ayuu yiri Gudoomiyaha.
Gudoomiye Gareed ayaa labadaasi beelood ugu baaqay in ay dagaalka joojiyaan, isagoona yiri “Labadaasi beelood waxaan rabnaa inaan si walaalnimo, ehelnimo iyo wax walba leh ugu sheego inay dagaalkaasi joojiyaan.”
Gudoomiyaha ayaa intaa ku daray “Dagaal wiil baa ku dhintee, wiil kuma dhasho, dagaalka hala joojiyo, u dhego nuglaada dadka ergada ah, maamulada degmooyinka, kan gobolka, odayaasha, waxgaradka iyo Saraakiisha Ciidamada.”
Next articleCiidamada amniga oo hawlgalo gaar ah ka sameeyay Muqdisho